Gemic laabu. Nkume ndị sitere na gemologists ọkachamara
GEMstones Ngosi & ahia
Na-adịgide adịgide ngosi nke ihe karịrị 250 iche nke gemstones si Cambodia na n'ụwa nile.
Privatelọ akwụkwọ gemological nke onwe na nke onwe, na-enye nyocha gemological na ọrụ nyocha.
nnukwu ụlọ nyocha
Okwu Mmalite nke GEM & GEMOLOGY
GEM mata - SYNTHETIC & MGBE - &LỌ & ADGAD
Gemstone Museum & dingzụ ahịa
Zụta nkume gemstones na ahia anyi
Privatelọ akwụkwọ gemological nke onwe na nke onwe ya, na-enye nyocha gemological, ọrụ nyocha na asambodo gemstone.
Cambodia bụ isi mmalite gị maka sapphires, rubies, zircons na ọtụtụ okwute. Anyị na-ahazi njegharị ụbọchị abụọ ruo ụbọchị iri nke gụnyere njem, ụlọ obibi, ileta ndị na-egwu ogbunigwe na ndị na-egbute ọla.
Kpọtụrụ anyị maka ahaziri ọgbakọ
Okwu Mmalite ka Gem & Gemology
Kedu otu esi amata nkume dị egwu, synthetics, ọgwụgwọ? Kedu otu esi eme atụmatụ ogo na ọnụahịa? Ga enweta azịza nye ajụjụ gị niile n’oge klaasị a.
NEW : N'ihi nnukwu ọchịchọ ụmụ akwụkwọ anyị na-enweghị ike ịga njem n'oge ọrịa a na-efe efe, ọ ga-ekwe omume ugbu a ịmụ ihe n'ịntanetị.
Gemstone ihe ngosi nka
Akụkọ anyị kachasị ọhụrụ, akụkọ gbasara ụwa gemstone. Njem anyị na mmemme.
Nke kachasị emerald na ụwa bụ Inkalamu, Lion Emerald mana The Bahia Emerald [...]
Olile anya olile anya bu diamond na-acha anụnụ anụnụ nke 45.52 carat. Ọ bụ nnukwu diamond na-acha anụnụ anụnụ achọtara [...]
Ekele diri Oriakụ Angelina Jolie
Ekele diri Oriakụ Angelina Jolie maka nleta a na-atụghị anya ya n’ụlọ ahịa anyị taa. Daalụ maka [...]
Mogok njem, Myanmar
Mogok njem na Myanmar - Mogok nkwari akụ - Mogok Burma ruby ​​Mogok njem, Myanmar Mgbe [...]
Ọzụzụ ahịa ọla na Sabara Angkor Resort & Spa
Ọzụzụ ire ọla na Sabara Angkor Resort & Spa Ms Iet na-azụ ndị nnabata na [...]
Ajụjụ ọnụ na Luc Yen A gbara m ajụjụ ọnụ taa na Luc Yen, nke ndị Vietnamese National [...]
Ajụjụ ọnụ nke French TV gbara m ajụjụ ọnụ site na M6 French TV channel "ENQUETE EXCLUSIVE", gbasara [...]
Deliverybọchị 3 nyefere zuru ụwa ọnụ
Mbupu Fedex Express na-ewekarị ụbọchị 3 ruo ụbọchị 4 maka nnweta. A mbinye aka a chọrọ n'elu nnyefe.
GEM ụlọ ahịa
nkume 4 dị oké ọnụ ahịa
Star ruby ​​6.00 ct $120.00
Star ruby ​​5.04 ct $101.00
Sapphire ojii ojii 1.18 ct $27.00
Blue sapphire na-acha odo odo 20K ọla ntị $899.00
Sapphire Blue 2.69 ct $1,076.00
Nkọwa 0.20 ct $130.00
Ogbe Champagne 1.57 ct $6,406.00
18K Rose mgbaaka ọla edo $605.00
Nkọwa 0.38 ct $247.00
Onye na-eme njem
Nhọrọ ndị njem
Ihe m mụtara ga-aba nnukwu uru n’ọdịniihu, m na-atụkwa anya ịga klasị ọzọ na Steeti ịmụtakwu ihe. Ọ bụrụ n ’ị na-eme atụmatụ ịzụta ọla ọ bụla, ị ga-ewere klaasị a!
ome ocha / February 2020
Ọla ahụ dị ezigbo mma ma ndị ọrụ ya nwere ezigbo ọyị na ọkachamara. Ahapụrụ m shop na mgbanaka ọnyx mara mma nke ga-echetara m oge m nọrọ na Cambodia :). Ọ bụrụ na m nwere oge karịa ebe a, ọ ga-amasị m ịnwale ụlọ ọrụ ahụ ịme mgbanaka onwe m!
O bara ezigbo uru ileta Gemological Institute, ndị ọrụ niile ahụ wee nwee ọfụma, nwee obiọma, nwee ndidi ma kọwaara gị ihe ọma ọ bụla. Aga m alaghachi na Siem Reap ma zụta ọnụahịa site na ebe a na nleta m ọzọ. 5 kpakpando!
Ọla ji ọnụ na mma ma anyị nwere obi ụtọ na ịzụrụ anyị. N'ozuzu oke ahụmịhe nke m na-akwado nke ukwuu… anyị nwere obi ụtọ na njirimara ọrụ, nke anaghị ekwe nkwa mgbe niile na Siem Reap.
Àgwà na nkọwa nke nkume dị iche iche anyị nwere ike ịhụ na ụlọ ahịa ahụ. Anyị mechara chọta ọmarịcha topaz na-acha ọcha, nke mara mma maka onye ọrụ ibe m! Daalụ Gemological Institute!
Kwuputa / Ka 2019
… Enwere m nleta na-adọrọ mmasị ma mụta ọtụtụ ihe banyere iche iche bara nnukwu uru.
Amaghị m banyere nkume dị iche iche na ihe bara nnukwu uru na Cambodia. Ihe mara mma ime na-abụghị temple.
Benji C / Ka 2019
… Anyị kpebiri ịlaghachikwuru ya ma zụta nkume ahụ. Ekwesịrị m ikwu na Daini n'ezie Gem na ụlọ ahịa ahụ. E wezụga ya, anyị nwere ike ọ gaghị achọ ịchọ inweta ihe ọ bụla site na ụlọ ahịa ahụ. Mmechi, ụlọ ahịa a pụrụ ịdabere na ya na ụlọ ahịa kachasị mma m nwere ike ịchọta na Siem Reap.
Ọ bụ ngwa ngwa laghachi m email na anyị kpebiri na a imewe na a price. Mgbanaka ahụ rutere ngwa ngwa ma ọ tụrụ m n'anya na e mere nke ọma ma maa mma. Aga m akwado ọrụ a kpamkpam ma na-eme ya ọzọ.
Ezumike23 / August 2019
… Gbaa mbọ hụ na ị gara ebe a ma ọ bụrụ na ị na-achọ nkume dị egwu. Ha bụ naanị ụlọ ahịa akwadoro na Siem Reap. Ndị ọrụ ahụ na-anabata gị nke ọma ma zaa ajụjụ gị niile.
Insp na-akpali m